Kwadoro ụdị thermomix TM5, TM31 na TM21 | Usoro ọgwụgwọ
Nhata n'etiti ụdị Thermomix: TM5, TM31 na TM21
Na Septemba 2014 Vorwerk kwalitere ụdị ọhụụ ọhụụ akpọrọ TM5. Ọtụtụ ndị ọrụ na-enweta ya kemgbe ọtụtụ afọ ma ụfọdụ ndị nwere ụdị ochie emeela ka ha dị ọhụrụ. Agbanyeghị, dịka igwe ndị a nwere ogologo ndụ, ọtụtụ ka na-esi nri na ebe ahụ. TM31 (arụpụtara na 2004) na, obere obere, ya na TM21 (arụpụtara na 1996). Youchọrọ esi nri na ụdị niile ahụ? Ọfọn, ọ dị mkpa ka ị mata ihe ndi ozo nke Thermomix TM5, TM31 na TM21.
Yabụ kedu ka ọ dị obere ọdịiche N'etiti TM5 na TM31, anyị chere na ọ bara uru ide edemede na-akọwa ọdịiche dị iche n'etiti mgbanaka atọ ka ị nwee ụdị nke ị nwere, ị ga-aga n'ihu ịnụ ụtọ usoro anyị ma gbanwee ha n'ụzọ zuru oke nkasi obi na n'elu ihe nile, nchekwa.
Nhata n'etiti TM31 na TM5
Thermomix TM31 na Thermomix TM5
Esemokwu ndị dị n’etiti ụdị abụọ a pere mpe karịa nke dị n’etiti 31 na 21, yabụ ọ ga-adị mfe ịmegharị usoro gị. Ga-ebu n'uche naanị akụkụ abụọ dị mkpa: oke okpomọkụ na ikike nke iko na ite varoma. Ka anyị lee ya anya n'ụzọ zuru ezu:
Oke okpomọkụ nke TM5 karịrị 120º, ebe TM31 ruru 100 reaches naanị. Nke a meghere ọtụtụ ohere dị na TM5, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-amị anụ ma na-akụ.
Sautéed ma sautéed: na TM5 anyị ga-mmemme 120º na 8 nkeji. Mgbe anyị nọ na TM31 anyị ga-etinye varoma okpomọkụ, nkeji 10. Ugbu a iji TM5 bido-mma ka mma, ọla edo karịa. Ọ kachasị kachasị anya mgbe anyị na-amị galik, dịka ọmụmaatụ, n'elu azụ azụ.
Varoma okpomọkụ: Na TM31 anyị na-eji ọnọdụ okpomọkụ Varoma eme ihe niile: ịmị ọkụ na varoma, ighe-eghe na ịcha mmiri, na-ebelata mmiri mmiri na sauces ... Agbanyeghị, na TM5 naanị anyị ga-eji varoma okpomọkụ wee mepụta uzuoku ma sie nri. ite varoma ma ọ bụ belata ihendori.
Esi nri na 100º: Dịka na TM31 na TM5 anyị nwekwara ike esi nri inine na 100º, dịka ọmụmaatụ, si otú a na-akwado nchekwa nke njirimara nri ma ọ bụ osikapa, nke ga-adịgide na ebe nri ya.
Ike ikike Varoma amụbawo site na 10%, site na lita 3 nke TM31 ruo 3.300 nke TM5.
Osimiri ahụ amụbawokwa ikike ya site na lita 2 maka TM31 ruo 2.200 maka TM5. N'ebe a, ị ga-akpachara anya ka enwere ike ịme usoro TM31 n'ụzọ zuru oke na TM5, mana ọ bụghị nke ọzọ n'ihi na iko ahụ nwere ike ijupụta. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme usoro TM5 na TM31, Gbaa mbọ hụ na emeghị ka ihe mgbaàmà ikike ikike kacha karịa (2 lita).
Varoma abawanyela ikike ya na nke a dị mma anyị nwere ike itinyekwu nri iji kpoo ha n'otu oge nakwa na ha na-atọpụ karịa ibe ha, na-akwado ezigbo nrugharị nke uzuoku. Dịka ọmụmaatụ, ugbu a, anyị nwere ike itinye ụsọ mmiri abụọ ma ọ bụ bream n'ụzọ ka mma ma ọ bụ karịa inine. Ọ dịkwa mma ma a bịa n'itinye akụkụ anọ ma ọ bụ ebu ọ bụla maka puddings ma ọ bụ puddings ebe anyị ga-enweta ọtụtụ ụdị.
Na TM5 ọsọ 10 ma ọ bụ turbo abawanyela rue 10.700 rpm (mgbe TM31 ruru 10.000). Nke a na-eme nkwadebe dịka gazpacho ma ọ bụ creams thinner na obere oge.
Ka anyị hụ ya na tebụl karịa nke ọma.
Isiokwu nke nha anya TM31 na TM5
Na-agba mmiri na nkata na / ma ọ bụ varoma Varoma okpomọkụ Varoma okpomọkụ
(site evaporation nke mmiri mmiri)
Varoma okpomọkụ Varoma okpomọkụ
Sauté ma obu sauté Varoma okpomọkụ - 10 min ihe ruru Okpomọkụ 120º - 8 min ihe ruru
Ikike max. nke iko 2 lita 2,200 lita
Ikike max. nke varoma 3 lita 3,300 lita
Mariposa Oke na ọsọ 5 Oke na ọsọ 4
Turbo (ma ọ bụ ọsọ 10) Na-erute 10.000 rpm Na-erute 10.700 rpm
Nhata n'etiti TM31 na TM21
Nke a bụ Ẹkot okpokoro na nke ị ga-agbaso usoro kwekọrọ ekwekọ, ya bụ, ọ bụrụ na a gbanwere usoro nri maka TM31 "ọsọ ngaji" ma ị nwere TM21, ihe ị ga-eme bụ ọsọ ọsọ mmemme 1 na nru ububa… dị mfe, nri?
Ugbu a ị nwere mkpịsị ugodi imeghari niile Ezi ntụziaka gaa na ụdị TM21 gị.
Isiokwu nke arụmọrụ n'etiti TM31 na TM21
Ịwụ ịwụ Speed ​​1 na urukurubụba
Gaa aka ekpe Mariposa
Okpomọkụ 37º Okpomọkụ 40º
Okpomọkụ 100º Okpomọkụ 90º
Chopping, ọsọ 4 Iri, ọsọ 3 ma ọ bụ 3 1/2
Grate, ọsọ 5 Grate, ọsọ 4
Shred, gbapụrụ ọsọ 7 ruo 10 Shred, gbapụrụ ọsọ 6 ruo 9
Ugwu ọcha, ọsọ 3 1/2 Gbaa ịnyịnya doro anya, ọsọ 3
Dịka ị ga-ahụ, enwere ọmarịcha ọdịiche dị n'etiti ụdị 21 na 31, dịka nke kachasị dị ala ma ọ bụ ọsọ maka ọrụ ndị dị mkpa nke ịkpụ, grating na shredding